Barnaamijka Maareynta COVID-19 waxaa bilaabay Adeegyada Sheybaarka Caafimaadka ee Premier isagoo ka jawaabaya waajibaadka tallaalka Biden
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Barnaamijka Maareynta COVID-19 waxaa bilaabay Adeegyada Sheybaarka Caafimaadka ee Premier isagoo ka jawaabaya waajibaadka tallaalka Biden
Adeegyada Sheybaarka Caafimaadka ee Premier (PMLS), ayaa maanta ku dhawaaqaya bilaabista barnaamijka maareynta COVID-19, Keep America Thriving, oo loogu talagalay inay ka caawiso ururada waaweyn sida waafaqsan wax ku oolka ah ee Tallaalka Maamulka Biden. Warka NBC ayaa sheegay in la soo gabagabeyn karo horaantii toddobaadkan. "Badbaadada Shaqada iyo Maamulka Caafimaadka (OSHA) waxay ka shaqaynaysay sidii loo horumarin lahaa heer deg -deg ah oo ku -meel -gaar ah oo daboolaya loo -shaqeeyayaasha leh 100 ama ka badan oo shaqaale ah si loo hubiyo in shaqaalahooda si buuxda loo tallaalo ama loo sameeyo baaritaan toddobaadle ah," ayay tiri Waaxda Shaqadu.
Adeegyada Sheybaarka Caafimaadka ee Premier (PMLS), ayaa maanta ku dhawaaqaya bilaabista barnaamijka maareynta COVID-19, Keep America Thriving, oo loogu talagalay inay ka caawiso ururada waaweyn sida waafaqsan wax ku oolka ah ee Tallaalka Maamulka Biden. Wararka NBC ayaa sheegay in la soo gabagabeyn karo horaantii toddobaadkan. "Badbaadada Shaqada iyo Maamulka Caafimaadka (OSHA) waxay ka shaqaynaysay sidii loo horumarin lahaa heer deg -deg ah oo ku -meel -gaar ah oo daboolaya loo -shaqeeyayaasha leh 100 ama ka badan oo shaqaale ah si loo hubiyo in shaqaalahooda si buuxda loo tallaalo ama loo sameeyo baaritaan toddobaadle ah," ayay tiri Waaxda Shaqadu.
Shuruudaha Madaxweynuhu waxay khuseeyaan in ka badan 130,000 oo meheradood oo ku baahsan Maraykanka oo dhan waxayna saamayn doontaa ilaa 80 milyan oo shaqaale oo dalka oo dhan ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo dad badan oo Mareykan ah ay wali ka labalabeeyaan tallaallada, waajibka ayaa la filayaa inuu culeys weyn saaro kaabayaasha imtixaanka qaranka oo ay sababtay baahida sii kordheysa ee tijaabooyinka COVID-19. Iyadoo taas la tixgelinayo, PMLS waxaa lagu diyaariyey mid ka mid ah awoodaha imtixaan ee ugu weyn qaranka iyo wax-soo-saarka gudaha ee sahayda imtixaanka aan xadidnayn.
Kevin Murdock, oo ah Maamulaha iyo Aasaasaha PMLS ayaa yidhi "Markii shaybaarrada kale ay dib u cabbireen intii lagu jiray xaaladdii xagaaga sababtuna tahay hoos u dhac ku yimid dalabkii tijaabada, “Waxaan sii wadnay inaan dhisno awooddeena shaybaar si aan ugu diyaar garowno qalliin kale sida kan aan hadda wajahayno. Sababtaas awgeed, waxaan diyaar u nahay inaan si mug leh wax uga qabanno shaybaarrada dalka oo dhan. ”
Qulqulka otomaatiga ah ee PMLS oo wata qalab shaybaar oo casri ah ayaa u sahashay inay socodsiiyaan ilaa 300,000 oo tijaabooyin COVID ah maalin kasta iyadoo 98% natiijooyinka la bixiyay 24 saac gudahood. Kooxdooda saynisyahannada PhD ee hoggaamineysa ayaa qayb ka qaatay jawaabta COVID-19 ee qaranka. Sababtaas awgeed, PMLS waa lammaanaha imtixaanka lagu kalsoon yahay ee kooxaha isboortiga xirfadda leh, dugsiyada iyo kulliyadaha, shirkadaha waaweyn, iyo waaxaha caafimaadka gobolka ee waddanka oo dhan.
Iyada oo ay jiraan kaabayaashoodii horumarsanaa, barnaamijka PMLS ee Keep America Thriving ayaa si gaar ah loogu talagalay shirkadaha wax-soo-saarka, xarumaha qaybinta iyo dhammaystirka, tafaariiqda baaxadda leh, dhismaha, iyo ururrada leh hawl-wadeennada xafiiska dhexdooda ah. Keep America Thriving waxay siisaa kuwan soo socda hay'adahaan:
Meesha leexashada ee barnaamijka tijaabinta goobta oo si joogto ah loogu diyaariyo xirmooyinka imtixaanka si dhakhso leh, natiijooyin sax ah
Tababbarka goobta iyo la -talinta hababka tijaabada habboon iyo istaraatiijiyad loo habeeyay tallaabooyinka imtixaanka ugu waxtarka badan
Baaritaannada antigen ee degdega ah
Tijaabooyinka PCR -ga oo lagu kaydin karo goobta